ဒေ၀ါလီပွဲတော်ည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဒေ၀ါလီပွဲတော်ည
Posted by သကြားလုံးကြော် on Nov 20, 2012 in Cultures, Photography | 16 comments
ဓာတ်ပုံ သကြားလုံးကြော် အရသာ
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့က ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဒေ၀ါလီပွဲ (Diwali) မှာရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတချို့ ပါ။ မြန်မာ သီတင်းကျွတ် နဲ့ခပ်ဆင်ဆင် မီးထွန်းပွဲတော်ပေ့ါ။ အိမ်တွေမှာလည်း မီးထွန်းကြတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့တော့ဒေ၀ါလီပွဲ အကြောင်း ဂူဂယ်လုပ်ထားသလောက်ပဲသိတာမို့ ပိုသိတဲ့သူများ ရှင်းပြပေးကြပါ။ မြန်မာစကားက အလုပ်အကိုင်အရှုံးတွေပေါ်လို့ပိတ်ရရင် ဒေ၀ါလီခံတယ် ဆိုတာနဲ့ ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိဘူး။ ဘယ်ကနေဘယ်လို ဒေ၀ါလီခံတယ် ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်လာလဲဆိုတာတော့ သိချင်သား။
လာတဲ့လူတွေကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးတဲ့ စမူဆာ စားကြပါ။ သောက်စရာအချိုရည်ကတော့ မန်ကျီးရည်ကို ငရုပ်သီးရော ၊ မဆလာရော၊ တခြားပူစပ်စပ် အမှုန့်တွေရော ခပ်ထားတယ် ထင်ရတဲ့ အရည်။ နာမည်မေ့သွားပြီ။ ငယ်ငယ်က အဖေ့ကုလားသူငယ်ချင်းက နှစ်တိုင်း အိမ်ကိုပို့ပေးနေကျ စမိုင်တော့ မပါဘူး။ အဲ .. စမိုင်က ဟိန္ဒူစာရောဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး၊ ဒေ၀ါလီလား၊ အစ်လား၊ တခြားပွဲလားတော့ မသိတော့ဘူး။ စားလို့ကောင်းတာပဲမှတ်မိတယ်။ ဘာမှသိပ်မသိပါဘူးလို့ ကြိူပြောထားပါတယ်နော်။
ဆီမီးခွက်အိုးဖုတ် ရှားတော့ တခါသုံးသောက်ရေခွက်လေးတွေနဲ့ မီးထည့်ထွန်းရတယ်။
Taj Mahal ပုံဖော်ထားတဲ့ ဆီမီးခွက်တွေ
Rangoli လို့ခေါ်တဲ့ သဲရောင်စုံတွေနဲ့ ပန်းချီပုံဖော်ကြတယ်။
အိန္ဒိယ မြေပုံ Rangoli
ဒီ Rangoliကို လက်တွေအများကြီးနဲ့ ဟိန္ဒူဘုရားကနေ စိတ်ကူးယူထားသလားမသိ
လက်မှာ ဟန်နာတက်တူးတွေ (ဆေးမှင်ကြောင်) ရေးပေးကြတယ်။ ဒီဟန်နာတက်တူးတွေက တော့ အိန္ဒိယပွဲတော်တော်များများမှာ လုပ်ပေးကြတယ်ထင်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တို့ ဘာတို့မှာရောပေါ့။ ဒီဆေးမှန်ကြောင်က တစ်ပတ်လောက်ပဲခံပြီး တဖြေးဖြေး အရောင်မှိန်ရင်းနဲ့ ပျောက်သွားတော့ ခဏအပျော်ဆို ကောင်းမှကောင်း။
အခုလက်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ မှင်လိုမျိုးဆေးက နာရီ နည်းနည်းကြာရင် ခြောက်ပြီး ကွာကျသွားတဲ့ အခါ အောက်မှာ အညိုရောင် ဆေးမင်ကြောင်ပုံစံကျန်ခဲ့ရော။ အဲဒီ အသားပေါ်မှာထင်ကျန်ခဲ့တဲ့ အရာကမှ တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက်ခံတာ။
လိပ်ပြာပုံ တက်တူးလေး ရေးပေးနေစဉ်
ပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေ ဖြူးထားတဲ့ ဟန်နာတက်တူး
အလည်လာတဲ့ တိဘက်ဘုန်းဘုန်းတွေကလည်း မီးရှူးဝင်ဆော့ကြတယ်။
ဒီကောင်မလေးက မီးပန်းဆော့မလို့ ပြင်နေတာ။ အမွှေးတိုင်နဲ့ ကန်တော့နေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။
အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက အကအရမ်းဝါသနာပါတယ်။ ပွဲမပိတ်ခင် ဘောလိဝု အကနဲ့ လူကြီးရော လူငယ်ရော ကလေးတွေရော မရှက်မကြောက်ဝင်ကကြရော။ ငယ်ငယ်က ကုလားကားတွေကြည့်ရင် ကလွန်းလို့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲထင်တာ။ အက ကသူတို့ culture ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းပဲ။ အခုတော့ သူတို့ကြည့်ရတာနဲ့တင် တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ နိုက်ကလပ်တွေကလို စက်စီဒန့်စ် မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့လိုက် တော်တော်ခုန်ပေါက် လှုပ်ရှားရတယ်။ ကတဲ့ အနုပညာနဲ့ ဝေးလွန်းလို့ ငယ်ငယ်ကမှုန်ရွှေရည် အကသင်ပေးတဲ့ ဆရာမလှလှတောင် လက်မြှောက်သွားရတဲ့ကျမက ဘောလိဝုအကသင်တန်းလေးများ သွားတက်ရင်ကောင်းမလားတောင်စိတ်ကူးမိတယ်။ ဗျိုင်းကပုံပဲပေါက်ပေါက် ပျော်စရာကောင်းလို့။
မှတ်ချက်။ ဒ့ါပုံ ဆရာသမားများဝေဖန်ပေးကြပါရှင့်။
Pink Candy has written7post in this Website..
View all posts by သကြားလုံးကြော် →
အင်္ဂလိပ်လို ရေးတော့ Deepavali တဲ့။ မြန်မာလို ဘယ်လို ဒေဝါလီသွားလည်း မသိ။
အသားမနာရင်တော့ အဲ့ တက်တူးလေးတွေ စိတ်ဝင်စားသား။
အသားမနာဘူး။ အကြာကြီးလဲမခံတော့ ရိုးပြီးပျင်းသွားတဲ့ အချိန်လောက်ကျ ပျက်သွားတော့ အတော်ပဲ။ အိန္ဒိယ လူမျိုးတွေတင်မက တခြားလူတွေလည်း ဟန်နာတက်တူး ရေးပေးတာ လမ်းပေါ်မှာတွေ့ဖူးတယ်။ မခိုင်ဇာတို့ရဲ့ စဉ်းကမ်းကြီးကြီး ဖင်ခေါင်းကျယ်ကျယ် ခြင်ကျားပူမှာတော့ လမ်းပေါ်မှာဟန်နာတက်တူး သမားတွေ မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။
အဲဒီဆေးတွေတော့ ရေးဖို့အဆင်သင့် ကတော့ဗူးလေးတွေနဲ့ ကုလားဆိုင်တွေမှာရောင်းတာတွေ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဆွဲချင်ရင်ပေါ့။
အင်း။ ဟုတ်တယ်။ ဒီမှာ တော့အဲဒါမျိုးတွေ့ဖူးဘူး။ ကယ်ရီကေးချားသမားလည်း မတွေ့ဖူးဘူး။ ဆေးဘူးတွေရှိတယ်။ မလုပ်တတ်တော့ မထူးပေါင်။ အသား စတစ်ကာမျိုးတော့ ဟိုတလောက တွေ့လို့ ဝယ်ထားလိုက်တယ်။
ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ကမ်းခြေတွေမှာ အဲလိုရေးတာတွေရှိတယ်၊
ဒါနဲ့ ညီမ ချိုချဉ်ကြော်က ဘယ်မှာတုန်းလို့ မေးဖို့မေ့သွားတယ်။ (သကြားလုံးနဲ့ ချိုချဉ် အတူတူပင်ဖြစ်၏) :harr:
မမခိုင်ဂျာနော် … တူညားနာမယ်လှလှလေး ပျက်တွားဦးမယ်။ ရဘူး ရဘူး။ သကြားလုံးမှ သကြားလုံး။ ဟီး ဟီး။
နေရာကတော့ အောက်မှာ သူဂျီး ဘီဒိုလေသံနဲ့ မေးထားလို့ ဖြေထားတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ သီတင်းကျွန်မီးထွန်းပွဲလိုပါပဲ ဘုရားကိုပူဇော်တာပေါ့ ။
တစ်ခုရှိတာက တော့ မြန်မာဘုရားက တစ်ဆူတည်း ။
ဟိန္ဒူတွေကတော့ နတ်ဘုရားတွေများတယ် ဗုဒ္ဓဘုရားလဲပါတာပေါ့နော် ။
ထေရဝါဒမှာက ဗုဒ္ဓဘုရား နတ်ပြည်ကနေဝါဆိုပြီးဆင်းလာတာကိုပူဇော်တာ ။
ဟိန္ဒူတွေကျတော့ နတ်ဘုရားတွေများလို့ထင်တယ် စုံအောင်စောင့်လိုက်ရတာ သီတင်းကျွတ်ပြီးနည်းနည်းကြာမှ နတ်ဘုရားတွေအကုန်စုံသွားလို့ ပူဇော်တာထင်တယ်။
ဘာပဲပြောပြော သူများအသက်မသတ်ပဲ ဆီမီးပူဇော်ပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲသက်သက်လုပ်တဲ့ ဘာသာချင်းတူလို့အားပေးတယ်။
ဂလိုလား။ ၀င်ရှင်းပြတာကျေးဇူးပါ ။
ကိုသူဝေပြာမှပဲ နတ်ဘုရားတွေလည်း အိန္ဒိယ စံတော်ချိန်နဲ့ ကြွကြတဲ့ပုံ
စမိုင်က ဒီဖက်မှာတော့ ဆယ်မယ်လို့လည်း ခေါ်တတ်ကြတယ်။ ဆယ်မျိုးပြည့်အောင် ထည့်ချက်လို့တဲ့ ။ နောက်ပိုင်း ခေါ်ရင်း စမိုင်ဖြစ်သွားတာ။ ကျမလည်း စမိုင်လို့ပဲ ခေါ်တတ်တယ်။ စားရတာ ဆိမ့်လို့ ကြိုက်တယ်။ ဟိန္ဒူစာမဟုတ်ဖူးလေ။ သိတယ်ဟုတ်။
ဟုတ်ပါ့ ညီမပြောတဲ့ လူမွဲစာရင်းခံလို့ ဖြစ်တဲ့ ဒေ၀ါလီတော့ ကျမလည်း သိချင်သား ။ သိသူများ ပြောပေးကြပါ။
နောက်ပြီး အဲ့ဒီက မီးခွက်နဲ့ မီးထွန်းပုံလေးကို သဘောကျတယ်။ ဒီမှာလည်း ဒီလိုခွက်လေးတွေ နဲ့ ထွန်းကြရင်ကောင်းမယ် ။ အန္တရယ်လည်း ကင်းတယ် လေတိုက်လည်း မငြိမ်းတော့ဘူး။ လျှပ်စစ်မီး ဘယ်လောက်လှလှ ဖယောင်းမီးကလည်း ထွန်းရတာ ပိုပြီး လှပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ မဟုတ်ရင် ဖယောင်းတိုင် အကုန်ထွန်းရတဲ့ ညဆို မငြိမ်းမချင်း ထိုင်စောင့်နေရတာ တအိမ်လုံးပတ်ပြီး ။ မီး လောင်မှာကြောက်လို့ ။
လက်မှာ ဆေးခြယ်တာကို သဘောကျတယ် ။ ဒန်းဆေးနဲ့ပဲ ခြယ်ကြတာပါ။ အသိတွေ တွေ့မိသလောက်။ တခါလောက်တော့ ခြယ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ချင်တယ်။
ဟုတ်တယ် အမရေ၊ ဖယောင်းတုိုင်မီးကမှလှတာ။ ဟိုတလောက တရုတ်လမုန့်ပွဲမှာ ဝေပေးတုန်းကရလိုက်တဲ့ စက္ကူမီးပုံးလေးသေးသေးတွေထဲမှ ဘက်ထရီနဲ့ မှန်ရီရီ လျှပ်စစ်မီးလုံးလေးတွေပါတယ်။ မီးပုံးအပြင်ကကြည့်တော့ တူသလိုလိုပေမဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီးလိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမဟုတ်ဘဲ မီးသေကြီး။
ဒေဝါလီ ပွဲတော် ဖြစ်တည်လာပုံက ..
ဒီလိုပါ … ဟိုလိုပါ …
ဒေဝါလီနဲ့ ဒေဝါလီ ဆက်စပ်မှု ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း ..
ဒီလိုပါ .. ဟိုလိုပါ ….
ကျုပ် မျက်လုံးထဲမတော့ ..
စမူဆာကြီးတွေပဲ မြင်မြင်လာတယ် …
စားဂျင်ဒယ် .. ဂျလွတ် .. ရှလွတ် …
စားပါစားပါ ၀အောင်စားပါ။ ၀င်အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါနော်
မန်းတလေးမြို့ က အသိဟိန္ဒူတွေကတော့ “ ဒေ့ဗ်ပါလီ ” ပွဲလို့ခေါ်ကြ သုံးကြတယ်
ကျုပ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ (၁၉၉၅လောက်အထိ) မန်းတလေးမြို့ ၂၇လမ်း တစ်လျှောက် ၊ ၈၄လမ်းမှသည် ၇၉လမ်းအထိ ၊ ဒီပွဲရောက်တိုင်း ၃ ရက်လောက် စတိတ်ရှိုး တွေ ၊ ရဟတ်တွေ ၊ ၁၂ရာသီမုန့် ဈေးသည်တွေ နဲ့စည်စည်ကားကားနဲ့ ပျော်စရာကြီးပေါ့ ။ ပိတ်ကားထောင်ပြီး ပရိုဂျက်တာလို စက်မျိုးနဲ့ (ဘာစက်လို့ ခေါ်လဲ မသိ) ဘောလီးဝုဒ်ကားတွေ တစ်ညလုံး ပြတယ် ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အချိုမုန့် ဆိုင် အနဲငယ်နဲ့ ၊ ဗမာမုန့် သည် အနဲငယ်လောက်ပဲ တွေ့ ရပါတော့တယ် ။
စနေနေ့ ညတိုင်း ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဘုရားပူဇော်ကြတာကို တစ်ရက် ညလုံးပေါက် သွားလေ့လာဖူးတယ် ၊ သီချင်းတွေတီးပြီး ပူဇော်ကြတာဗျ
သကြားလုံးကြော် ရဲ့ ပုံတွေအားလုံးကတော့ ရှယ်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဦးဦးပေ ပြောမှ ကုလားကားကြည့်ပြီး ဘောလီးဝုအက ခုန်ပေါက်ရရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားမိတယ်။
အသိကုလားတစ်ယောက် ကို သူ့သုငယ်ချင်းကမှာတယ် ”ကျမကြည့်ဖူးတဲ့ ကုလားကားကအချစ်ဇတ်လမ်းလေးကြိုက်လို့ ရှင်အိန္ဒိယကပြန်လာရင် အဲဒီအခွေလေးရှာဝယ်လာပေးပါ” လို့မှာလိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒီလူပြန်လာတော့ အခွေတော့ပါလာတယ်၊ မှာလိုက်တဲ့ အခွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ သူ့သူငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်တယ် ”ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ မှာလိုက်တဲ့အခွေ မဟုတ်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး၊ ဇတ်လမ်းတွေက အကုန်တူတူချည်းပဲ” တဲ့။
အိန္ဒိယက ကုလားကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်။ လူမျိုးခွဲတယ် လာမပြောနဲ့ဦး။ ဟွန်း :-)
နိုဝင်ဘာမှာ ဒီလောက်အနွေးထည်တွေနဲ့.. အေးတော့အေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသပဲ..လောက်သိကြတာ..။
(ဘယ်ပေါက်မလဲ.. အချို(သကြားလုံး)ကြော်ထားသကိုး.. )
ကျုပ်တော့.. ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းကျွတ်မှာ အယ်လ်အေဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆီမီးတထောင်ပန်းတထောင်ပွဲ.. ကင်မရာလက်စွမ်းပြလိုက်တာ.. ဖြူလိုက်..မဲလိုက်နဲ့..
စာရင်းချုပ်တော့.. တပုံမှ မရလိုက်.. :buu:
နေရာဒေသကတော့ (ဘုန်းကြီးကျောင်းပွဲ ဖိတ်စာတွေထဲမှာလို) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ကုလားများပေါသောမြို့။
Shallow DoF ပုံတွေပဲ. ဗယာကြော်ပါဗျာ.
ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ကောင်မလေးပုံ တပုံပဲ ghosting ဖြစ်နေတာ တွေ့တာပဲဗျို့
ကျန်တဲ့ပုံတွေ အားလုံး နှစ်သက်ပါကြောင်းးး
ဟာရေး အစ်တိုရီ..ပါ ..သကြားလုံးလေး